Shariif Xasan: ”AMISOM waa in lasoo kordhiyaa”!
arlaadi October 13, 2017 No Comments
Madaxweynaha maamulka Koonfur galbeed oo hadlayay kadib markii uu kasoo laabtay shirkii maamul goboleedyada uga socday magaalada Kismaayo ayaa ka hadlay arimo dhowr ah.
Shariif Xasan oo ay hada ku furanyihiin mowjado mucaaradeed oo kaga imanaya xildhibaanada baarlamaanka KG, kuwa dowlada federaalka ee lagasoo doorto deegaanada Koonfur galbeed ayaa waxa uu sheegay inay jiraan dad ku ciyaaraya dhimbil dab ah balse geedkii orod lagu fuulo loogasoo degayo orod isaga oo hadalkiisa ku durayay dowlada federaalka Soomaaliya.
Madaxweynaha maamulka Koonfur galbeed waxa uu sheegay in shirkii Kismaayo kusoo idlaaday uu danta ummada Soomaaliyeed iyo masiirkeeda ka tarjumayo isaga oo dhanka kalena sheegay in federaalka uu yahay wax u roon ummada Soomaaliyeed.
Mar uu ka hadlayay ciidamada AMISOM ee dhowr iyo tobanka sano ku sugan gudaha Soomaaliya ayaa uu Shariif Xasan sheegay inay jiraan dad ka hadlayo in la dhimayo ama wakhtigooda uu dhamaaday balse aan weli la gaarin loona baahanyahay in lasoo kordhiyo AMISOM!
Hadalkiisa ku aadan AMISOM oo u muuqda mid u adeegayo dano shisheeye ayaa waxa uu dhanka kale ku durayay dowlada federaalka Soomaaliya oo qorsheynayso in la yareeyo ciidamada AMISOM ugu dambeyntiina dalka laga wada saaro ayada oo ay bederli doonaan ciidamada qaranka oo hada la wado tababarkooda iyo kuwii horay u jiray.
Madaxda maamul goboleedyada ayaa isku bedelay wakiilada dalal shisheeye oo ku howlan bur burinta dowladnimada Soomaaliya iyo in dowlada hada jirto oo dadaal fara badan muujinayso la wiiqo awoodeeda.